November 17, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Somali News November 17, 2019
BEIJING (SONNA) — The 19th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) concluded its fourth plenary session in Beijing on Thursday with the release of a communique. Xi Jinping, general secretary of the CPC Central Committee, made an important speech at the session presided over by the Political Bureau of the CPC Central […]Sii akhriso
Cayaaraha November 17, 2019
(Barcelona) 17 Nof 2019. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Barcelona ee Eric Abidal ayaa isku dayay inuu falanqeeyo guuldaradii niyadjabka aheyd ay kala soo laabteen Liverpool lugta labaad wareega afar dhamaadka tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkii hore. Barcelona ayaa 3-0 kaga soo adkaatay kooxda Liverpool kulnka lugta hore wareega afar dhamaadka tartanka Champions Sii akhriso
(Barcelona) 17 Nof 2019. Daafaca kooxda Barcelona ee Gerard Pique ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xilliga uu ka fariisanayo ciyaarista kubadda cagta. 32 jirkan ayaa ka mid ah daafacyada ugu fiican ee soo maray taariikhda Barcelona, wuxuuna xirfadiisa kooxda koowaad ay soo bilaabatay sanadkii 2008, kaddib markii uu kaga soo laabtay naadiga Manchester United. Gerrard […]Sii akhriso
Soomaaliya November 17, 2019
Muqdisho-(SONNA)-Wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in lasoo gabagabeeyay wejiga koowaad ee gurmadka waxyeelladii ka dhalatay fatahaadda Webiga Shabeelle ee mara Baladweyne. War bixin ay soo saartay Wasaaradda gargaarka Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay xogta gurmadka fatahaadda Webiga Shabeelle ee mara Magaalada Sii akhriso
(Paris) 17 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso inay la soo wareegto laacib ka tirsan naadiga reer England ee Liverpool. Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ay xiiseynayso saxiixa Adam Lallana kaasoo ay doonayaan inay beeca xorta ah uga soo qaataan Liverpool. […]Sii akhriso
(Munich) 17 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa la soo sheegayaa inay la soo wareegayso goolhaye ay bedel uga dhigato shabaq ilaaliyaheeda haatan ee Manuel Neuer. Sida ay warinayso Sport1 Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa tixgelinaysa inay u dhaqaaqdo Goolhayaha Schalke ee Alexander Nubel si ay uga dhigtaan bedelka Manuel Neuer. 23-sano […]Sii akhriso
Nareykanka & K/Korea oo dib u dhigay dhoolatus ciidan
Mareykanka iyo Kuuriyada Koofureed ayaa dib u dhigay dhoolatus ciidan oo ay dhaleeceeyeen Kuuriyada Waqooyi,kuwaas oo ku tilmaamay tallaabo la doonayo in lagu xoojiyo dadaalka nabadeed ee socda. Dhawaaqaan ayaa yimid manta oo Axad ah , ka dib markii xukuumadda Pyongyang ay dhowaan ku hanjabtay inay aargoosaneyso haddii dhoolatuska ciidan ee la qorsheeyay dabayaaqada bishan Sii akhriso
New-York-(SONNA)- 17-Nov. Dowladda aan walaalaha nahay ee Kuwait ayaa mar kale ku baaqday in la ixtiraamo madaxbanaanida iyo xornimada siyaasadeed ee Soomaaliya, kadib kulan ay qayb ka ahayd oo golaha Ammaanku ka yeeshay xaaladda Soomaaliya kaasi oo ka dhacay New-York. La taliye Nawaf Al-Ahmed oo ka mid ah ergada joogtada ah ee dowladda Kuwait u […]Sii akhriso
(Barcelona) 17 Nof 2019. Lionel Messi ayaa wadahal heshiis kordhin ah kula jira Barcelona sida uu xaqiijiyey agaasimaha ciyaaraha Kooxda reer Spain ee Eric Abidal. Xiddiga xulka qaranka Argentina ayaa 18-sanadood ku qaatay Barcelona laakiin mustaqbalkiisa ayaa su’aal la galiyey kaddib markii ay soo shaac baxday horraantii sanadkan inuu si xor ah uga tagi karo […]Sii akhriso
(Paris) 17 Nof 2019. Kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ayaa la soo warinayaa inay saxiixa Jadon Sancho kula tartamayso naadiga Manchester United. Kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska ee Paris ayaa eegeysa inay da’yarkaan Ingiriiska ah bedel uga dhigto booska xiddiga xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr. Sida ay ku warammayso The Express Paris Saint-Germain […]Sii akhriso